Iyadoo dhalashada teknoolajiyada casriga ah, xiriir shakhsi xoog leh Ilaah hore u gaadhnay karto by hab oo idaacadaha. Halkan waxa ku jira labaatan ugu soco in Idaacadaha Injiil ee Maraykanka ku yaalla goobood oo kala duwan:
1. Global Southern Injiil Radio
Global Southern Injiil Radio waxaa la aasaasay si loo horumariyo erayadii Rabbigu kaga dhex music iyo hadalka lagu hadlo. Xarunta ayaa waxaa conceptualized by Randy Renigar oo waxaa ku sugnaa garoonka Pilot Mountain ah, North Carolina. Global Southern sidoo kale kor u adeegta in 40 gobol oo gaarey dhallinyarada ee cusboonaysiinta Christian iyo xoojinta koonfurta.
2. HOPE 103,2
Rajo 103,2 , maadaama ay magac soo jeedisay, ay higsaneysaa in ay faafin rajo iyada oo jawi qoysaska saaxiib iyo ammaan-dhegaysiga. Himilada waa in, " xidhiidh, Hope inay u beddesho noloshooda, caqiidadooda iyo dhaqanka " . Idaacada ayaa waxaa ku sugnaa garoonka Seven Hills, Colorado iyo waa caan u faallooyin ay kala nastay barbaro iyo music dhaqaaqin.
3. 95.7 FM Halleeluuya
95,7 Halleeluuya FM waa idaacada Injiil ku salaysan Nof Tennessee. Waxaa la og u faallo naftooda jira, iyo kiniisadda. Idaacada waxay leedahay qayb loo gargaaro Dadka oo su'aalo weydiin kartaa oo ka raadinaysid caawimaadda xagga ruuxa iyo moral baryadiinna.
4. Eebehenno 1390
Eebehenno 1390 waa idaacada Injiil ah oo ku yaalla Chicago, Illinois. Waxaa la og yahay ay ku sheeko ka mid ah sheekooyinka, taas oo aayadda Kitaabka Quduuska ah waxa uu la xidhiidhaa. Dadka haysta sheekooyinka adkaa wadaagi karaan waayo-aragnimada iyo xitaa bixin karaan talo kuwa murugaysan tahay.
5. KAGV 1110AM
KAGV 1110AM (Alaska ee Injiil Voice) ayaa Big Lake, Alaska sida ay magaalada ee liisanka. Waxaa la leedahay Voice for Masiix Wasaaradaha, Inc. xarunta raadiyaha waxaa loo ganaaxo by Federaalka Communications Commission on January 30, 2002, taas oo sidoo kale waa taariikh baahinta hore.
6. Katz (AM)
Katz (AM) ayaa St.Louis, Missouri sida ay magaalada ka mid ah laysanka halka uu leeyahay Greater St. Louis sida meesha ay warbaahinta. Its brandingeksperten waa Halleeluuya 1600 iyo boorar halku ah, "Maanta music Injiil. Waxa ay ku bilaabatay baahinta ee 1955 sida Habsami iyo Blues / Music saldhigga Soul.
7. KBLK - LP 106,3
KBLK - LP 106,3 boorar halku ah, "qaadayso dadka". Tani idaacada Injiil wuxuu ku salaysan yahay in Shreveport, Louisiana iyo waxaa iska leh Madowga United waarta Leadership. Nidaamka webcast ay ku maqlayaaye nool. Xarunta raadiyaha ayaa lagu yaqaan xir-fadeed ee qeybta dhalinyarada ah.
8. KCWJ (1030 AM)
Iyada oo ku saleysan ee Nairobi, Kenya, waa uu jecel yahay ka mid ah dhagaystayaasha sababta oo ah war uu soo geliyo, wadahadalka u bilaabo iyaga la, daboolaya wararka ciyaaraha ugu danbeeyay oo keeni madadaalada doodaha iyo sidoo.
KFIT ayaa Lockhart, Texas sidii ay magaalada oo ogolaanshaha ah, meesha Austin sida meesha ay warbaahinta. Taariikhda ay hawada kowaad wuxuu ahaa on November 8, 1983, oo uu ahaa il joogta ah music diinta ku salaysan ee aagga. Waxaa hore loo odhan KCLT.
10. KKNO (750 AM)
KKNO (750 AM) ayaa Gretna, Louisiana sidii ay magaalada ruqsada ah oo u adeegta degaanka New Orleans. Waqtigan xaadirka ah, waxa ay leedahay Blakes C. Robert ka Enterprises, Inc. radio Tani saamiyada xarunta inta jeer ee radio isla saldhigga WSB ee Georgia taas oo shaqeeyaan oo keliya inta lagu jiro saacadaha maalintii.
11. WEUP (1700 AM)
WEUP (1700 AM) waxay u adeegtaa Huntsville, Alabama iyo inta badan Valley Tennessee ee North Alabama. Yeedhay sidii adoo ah "Huntsville Heritage Station" tan iyo waa hore ee gobolka si ay u baahin qaab magaalooyinka, raadiyaha this door muuqda in baaritaan Kongareeska sanadkii 1963, taas oo keentay in dib u habaynta sharciga Federaalka Communications Commission.
WGNU ayaa dhagax adag City, Illinois sidii ay magaalada ruqsada ah oo u adeegta St.Louis, Missouri. Taariikhda ay hawada kowaad wuxuu ahaa 1961 oo la aasaasay by Chuck Norman. Idaacada ayaa lagu yaqaanaa heesaha ay Injiil iyo faallooyin light.
13. WGOK (World Ilaah ogyahay kaliya)
WGOK (World Ilaah ogyahay kaliya) lahaa taariikhda hawada ugu horeeyay ee 1959. Idaacada waxay u adeegtaa Mobile iyo nawaaxigeeda iyo Mobile, Alabama ayaa sida ay magaalada ee liisanka. Waxaa la leedahay Media Cumulus iyo waa shirkad walaashiis WABD, WBLX - FM, WDLT - FM iyo WXQW.
14. WGRM - FM
WGRM - FM faantaa halku ah, "24 Hours of Great Injiil Music". Its magaalada ee liisanka haddii Greenwood, Mississippi iyo lahaa taariikhda ay hawada ugu horeysay ee 1989. Waxaa la aasaasay by Clay Ewing, laakiin waxaa hadda la leedahay xarumo warbaahineed Christian ah ee Greenwood, Inc.
WIMG adeegta Trenton, New Jersey oo uu leeyahay Ewing sidii ay magaalada ee liisanka. Inta jeer ee radio Its waa 1300 Am (kHz) oo waxaa iska leh Morris Broadcasting Company ee New Jersey, Inc. Sidoo kale waa saldhiga ugu da'da weyn radio ee New Jersey.
WLLV adeegta Louisville Kentucky iyo sidoo kale waa ay magaalada ee liisanka. Waxaa lahaa taariikhda ay hawada ugu horeysay ee 1941, waxaana ay hadda leedahay Radio dayntooda, LLC. Idaacada ayaa hore loogu soo orday dalka iyo music galbeedka ilaa maalintii la iibiyay African - American wadaadada ka Chicago sidaas, u beddelaya galay music dhaqameed madow injiilka.
17. WOAD (Working On A Dream)
WOAD (Working On A Dream) ayaa Jakson, Mississippi sidii labada ay magaalada ka mid ah laysanka iyo warbaahinta deegaanka. Waxaa la leedahay YMF Media LLC iyada oo ruqsad YMF Media Mississippi LIISAN LLC.
18. WORG - FM
Idaacadda Radio gaarsiineysa Caribbean music iyo wararka. Waxay kasbatay ay tahay warkii ay sabab u tahay tayada music iyo kalsoonida oo laga heli karo.
19. WTYS - FM ayaa Marianna, Florida sida ay magaalada ka mid ah laysanka iyo Dotaan, Alabama sida meesha ay warbaahinta. Waxaa hadda leedahay James L. Adams Jr. raadiyaha maray saddex isbedel calaamad wac tan iyo sanadkii 1991.
20. WFTH - FM
WFTH - FM leedahay magaalada ee liisanka ee Magaalada New York. Idaacada Tan waxaa loo yaqaan isagoo heeso Christian casriga ah iyo qaybaha ku lugta leh wada xiriirka faca-fadeed. Waxaa lahaa taariikhda ay hawada ugu horeysay ee 1964,
Sida loo Download Free Ringtones ka Zedge
Sida loo Download Videos ka National Geographic
> Resource > Download > Top 20 Injiil Radio Stations in ay ka qiimo Your Isku day